Ekwindla ka-2014 kulemboni ishicilele eziningi ukukhishwa ezithakazelisayo futhi ongasoze. Ngaphezu kwakho konke, ukwehluka, ukunakekelwa okukhethekile kufanele anikezwe eyodwa kwezine owayethandeka kakhulu umuntu wokuqala Bhalobhasha Far si-. Ngokungangabazeki, esasisandulele oye wabangela injabulo phakathi abadlali abaningi, kanye omelene main lapho sibhekene Vaasa Montenegro wayebhekwa njengoba villain onekhono kakhulu emlandweni isiqophi imidlalo. Entsha "Far Cry" obekumele lidlule ucezu yokugcina kokubili zibukeke ngokuya Gameplay. Kodwa hhayi konke kwakuyize bushelelezi kanjalo Ubisoft, nabadlali abaningi ababhekene nayo obuthile ezihlobene lobuchwepheshe ingxenye umdlalo.
Izinkinga ezivamile ezibhekene abasebenzisi
Ngokushesha ngemva umdlalo labetibambile ukukhululwa Inthanethi igagasi yokucasukela kusukela abadlali akhononda zabagovannost. Okuthunyelwe kungabonwa kugembula izinkundla okungahambisani ukusebenzisa Far Cry 4, isikrini black in the game, umsindo akusebenzi, sags FPS. Tinkinga letinyenti babe umphumela ukuthuthukiswa iphutha futhi imbangela abanye abasebenzisi steel ngokwabo esakhohlwa ngezinto aphansi. Kodwa kuthiwani uma ungagijimi Far Cry 4? Isixazululo akunzima kangako. Okudingekayo - kungcono kancane kancane nesineke futhi bachitha manipulation ikhompyutha yakhe, ezichazwe ngezansi.
Isikhathi akusho yima, minyaka yonke aphume umdlalo, ngoba umdlalo ukhululekile lapho bonke zidinga izinhlelo kahle. Ngakho-ke, uma Far Cry 4 kungaqali, ulenga nobe kwezimoto njalo, kufanele kuqala uqhathanise ukusebenza PC yakho nezidingo uhlelo wamemezela onjiniyela. Ngokusho Ubisoft, ikhompyutha yakho kufanele izici ezilandelayo:
Windows 7 noma 8 kancane ukujula 64 izingcezu.
Intel Processor Series Core i5, 2.6 GHz, noma inkampani AMD sika Phenom II le X4 955 3.2 GHz.
I-PC Kumele ube etholakalayo 4 GB we-RAM.
I GTX 460 kusukela Nvidia noma Radeon HD 5850 nge okungenani 1 GB imemori yangaphakathi kanye nekhono ukusekela IDirectX 11.
On the drive kanzima kufanele okungenani 30 GB yesikhala samahhala.
Ukuqala umdlalo ku-64-bit-Windows uhlelo kumele ukufakwa ekhadini lakho computer kanye ihluzo ukusekela IDirectX 11. Uma PC yakho ihlangabezana noma idlula ukucushwa ngenhla, ungaqala ukufaka umdlalo. Into esemqoka - ukuze siqiniseke ukuthi ifolda lapho ukufakwa oyokwenziwa, ayiqukethe izincwadi Russian. Uma ungenalo ugijime, "Far Cry 4", ke isicelo kufanele zifakwe njengoba umqondisi.
Ukubuyekeza abashayeli isiqophi ikhadi
Abantu abaningi bavame ukukhohlwa mayelana update entsha kuvidiyo yayo. Futhi lokhu kungaba isizathu sangempela esenza ungaqali Far Cry 4. Black Screen, subsidence olubonakalayo FPS, izingozi umdlalo - the nobunzima njalo kakhulu nazo abasebenzisi ngenxa ephelelwe yisikhathi abashayeli ihluzo ikhadi. Ngisho ngesikhathi izinhlelo kuqhathaniswa ubudala, ukufakwa izibuyekezo ezintsha kuzosiza ukwandisa ukusebenza PC yakho. Odinga ukukwenza - ukuya imithombo ezisemthethweni noma Radeon Nvidia, khetha imodeli isiqophi ikhadi, thwebula futhi ukufaka abashayeli zakamuva kukhompyutha yakho.
Ngokuvamile yonke isofthiwe ezengeziwe efakwe kanye umdlalo. Kodwa namakhophi pirated ngakho-ke kwenzeka ukuthi kufanele ubuyekeze noma faka kabusha zonke izinhlelo ezidingekayo. Uma Far Cry 4 kungaqali, isikrini black egcwele isikrini sonke esikhundleni isithombe esihle, kudingeka siqiniseke ukuthi PC iqukethe 11 iDirectX, Visual C ++, NET.Framework futhi thuthukisa kuya enguqulweni yakamuva.
Game ayikwazi ukusebenza okwamanje ngenxa yokuntuleka inkumbulo. Kulokhu, umsebenzisi kufanele kwandiswe inzuzo wefayela lokuvula ukuba 4 GB.
Ukuze usebenze ngokugcwele, umdlalo kudinga okungenani processor isikwele-core. Kodwa ngisho abanikazi dual core izinhlelo akudingeki angathukutheli uma ikhompyutha yakho isaphotha Hyper-Ukuchusha. Lobu buchwepheshe uyakwazi ukudala kwemali eziningana virtual, ngokulinganayo usabalalisa umthwalo phakathi kwazo. Uma ungenalo ugijime, "Far Cry 4" ezimbili-core processor, kumelwe futhi ufake fix ekhethekile, lapho ufuna ukudlala umdlalo futhi ujabulele ubuhle bayo, ngisho kumakhompyutha kuqhathaniswa ababuthakathaka.
Khubaza izinhlelo unqulo wesi arab
isofthiwe Antivirus kungaba isizathu sangempela esenza ungaqali Far Cry 4. Izinambuzane umdlalo, emva esifushane, kanti abadlali bavamile ukuba ungayiqondi isizathu lezi zinkinga. Isikhathi esiningi kwenzeka ku pirate amakhophi. Iqiniso lokuthi anti-virus software futhi izinhlelo zokuvikela azibonayo Ivala i-tablet ukuthi isetshenziswa ukuphula inguqulo yasekuqaleni, njenge-malware futhi ngaleyo ndlela iyivimbela. Kodwa ngisho abanikazi izinguqulo ilayisensi ungase ubhekane kancane ukulandwa imidlalo ngenxa ukuqinisekiswa noHlelo unqulo wesi arab. Lokho zazingekho izinkinga ezinjalo, kubalulekile ukukhubaza anti-virus software ngesikhathi. Yiqiniso, ukwenza lokhu Kunconywa ngakhoke Ukuvikelwa kufanele limise PC kuphela kuze kuphele isikhathi umdlalo. Uma uhlelo lwe-antivirus namanje ivinjiwe, kufanele uhlole amafayela ehlezi yedwa, futhi bawasuse.
Hlola ukuthi wonke amafayela umdlalo
Ngisho kokuthi ihlolwe zonke Kulezi zindlela ezingenhla, umsebenzisi angabona ukuthi Far Cry 4 ngeke ukuqala. Isicelo akusebenzi ngenxa yokungabi bikho eyodwa noma ngaphezulu yezingxenye yomdlalo. Lokhu kungenzeka ngenxa yezizathu eziningana. Uma usebenzisa inguqulo ilayisensi yomdlalo, noma umdlalo alulayishiwe ngokugcwele inkonzo yokudlala noma kukhona ukwehluleka kohlelo.
Ukuze ulungise lokhu, udinga ukuya esitolo online bese ubamba isibuyekezo isicelo noma uhlole ukuthi awekho yini amaphutha. Uma ulanda ikhophi pirated ka Far Cry 4, futhi emva kokufakwa abhekene nenkinga efanayo, bese cishe, oyilandile umdlalo akulona ifayela eyesekelwe ngokulondoloza noma esakhelwe ufa ukukhiya Ukuvikelwa kukhompyutha yakho. Uma ukhetho lwesibili iye wawususa, kubalulekile ukuthola inguqulo ezehlukene umdlalo bese faka futhi. Isexwayiso kumele kusetshenziswe ukulanda amafayela kusuka imithombo engathembekile, ngoba kungaba isofthiwe enonya, okungenza isimo sibe sibi ohlelweni lwakho.
Thola ikhambi lenkinga phezu izinkundla
Esihlokweni ke wethulwe izixazululo zezinkinga ezivamile ezibhekene abasebenzisi. Kodwa uma ungenayo ugijima, "Far Cry 4", futhi bonke Kulezi zindlela ezingenhla, ungadikibali yi efanele, kubalulekile ukuba ubheke ikhambi lenkinga yakho ku izinkundla womdlalo, ngaphansi kwesihloko esithi ezifanele. Iqiniso ukuthi cishe engenakwenzeka ukunikeza iseluleko zonke izinkinga abazalwane ababehlangabezana nazo kwelinye sihloko. On the amageyimu Intanethi, abadlali abaningi baxoxisana zonke izinhlobo ngemiraro emdlalweni othize, futhi anikeze iseluleko sendlela yokuxazulula kubo.
Musa Qalisa "Far Cry 4" akusebenzi kahle noma ngisho iphutha Ngabathuthukisi ekuqaleni kudedelwa umkhiqizo hhayi ngempela ephelele. Kulokhu, akukho manipulation umdlalo ngeke kusize, futhi une kuphela ulinde nezimagqabhagqabha ezintsha ukuthi kufanele silungise zonke izinkinga. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, Ubisoft uye wakwazi ukwenza umdlalo omuhle ngempela, okuyinto isithandwa abasebenzisi eziningi.
Indlela yokwenza insimbi block "Maynkraft" - imiyalelo
Izikhindi Denim nge okhalweni okusezingeni eliphezulu - umkhuba 2013
Amahhotela eVogue Avantgarde (Geynyuk, Turkey) - incazelo, amanani nezibuyekezo
Ihhotela Albatros Garden Resort Indawo abantu abajwayele 4 * (Hurghada): izithombe kanye nokubuyekeza, izincazelo